Archive du 20161128
Kolikolin�ny Frankofonia 600 tapitrisa Ar nisy nanodina ?
Vita iny ny fihaonana an-tampon�ny Frankofonia. Misy ny zavatra tsy mazava toy ny loharanom-bola marina nikarakarana azy,
Fifanarahana �Frantsa-Madagasikara� Hahazo tombony ireo tan�n-dehibe
Nisongadina nandritra ny fandraisan�i Madagasikara ny fihaonana an-tampon�ny Frankofonia andiany faha-16 ny fahatongavan�ny Filoha Frantsay Fran�ois.
Faniry Alban Rakotoarisoa na �Gangstabab� Niala tao amin�ny � Mitsangana Ry Malagasy �
Niala tsy ho ao anatin�ny hetsika � Mitsangana Ry Malagasy � na MRM intsony ny Antoko Politika Madio (APM) tarihin�i Faniry Alban Rakotoarisoa na Gangstabab.
Fran�ois Hollande Niaiky ny heloky ny Frantsay tamin�ny 1947
Nandritra ny fanaterany fehezam-boninkazo teny amin�ny anjely mainty eo afovoan�ny farihin�Anosy ho fahatsiarovana ireo Malagasy maty niady ho an�i Frantsa no naneken�ny filoha Frantsay Fran�ois Hollande fa tena namono sy nandripaka ny Malagasy ny Frantsay tamin�ny 1947.
Taratasin�i Jean Arahabaina e !
Miarahaba anao aloha ry Jean tamin�izao dingana lehibe vitanao izao a !
FANOMEZANA FARAN�NY TAONA Olona valo sahady no efa notoloran�ny Airtel loka
Olona valo tsara vintana sahady no efa notoloran�ny orinasam-pifandraisana Airtel loka ny faran�ny herinandro teo ao anatin�ilay hetsika �tanteraka ny nofinofiko� tanterahin�izy ireo entina hanomezana fahafaham-po ny mpanjifany amin�izao faramparan�ny taona izao.
Kaominina Ambavahaditokana Tsy mety mivoaka ny fanampiana avy amin�ny fanjakana
Velon-taraina ny amin�ny tsy mbola nivoahan�ny fanampiana ho an�ny kaominina avy amin�ny fanjakana ny Ben�ny tan�nan�Ambavahaditokana Andriamihaja Bruno.
Tohizo izay tsara, ataovy mangarahara!
Vita soa aman-tsara ny fihaonana an-tampon�ny frankofonia. Ady hevitra lehibe no nisy teto saingy tsy hanova na inona na inona izany, fa ny manatsoaka lesona no azon�ny tsirairay hatao, na ny mpitondra na ny mpanohitra na ny vahoaka. Nisy ny lesoka ary nisy ihany koa ny zavatra tsara izay mendrika ny hotohizana